Anyị nwalere Honor 6, njedebe dị elu maka euro 299 | Gam akporosis
Honor 6, mmetụta mbụ nke Huawei smartphone dị ike
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Huawei, MWC, Nyocha
Huawei ewetawo MWC nso ya mbinye aka ohuru Honor. Emeputa maara na aha ya na-adịghị nnọọ mmasị na Europe n'ihi ya, ọ na-achọ a ọzọ mara mma aha maka n'ebe ọdịda anyanwụ ọha, Sọpụrụ, na a akara nke na ngwaọrụ na-na ha gụsịrị na teknuzu e ji mara ga-eme ka ị daba na ịhụnanya.
Nyaahụ anyị gosiri gị gị niile ihe nzuzo nke Honor 6 Plus, nnukwu titan nke ezinụlọ Honor ọhụrụ. Ugbu a ọ bụ oge nwanne ya nwoke, onye Na-asọpụrụ 6, ọnụ ya na njirimara ndị na-ebuli ya elu nke ngalaba ahụ na ọnụ ahịa dị egwu
1 Ọmarịcha mma na nlekọta
2 Sọpụrụ 6, ama dị ike nke na-erughị euro 350
3 Igwefoto, otu n'ime ike nke Honor 6
4 Nnweta na ọnụahịa
Ọmarịcha mma na nlekọta
Huawei na-eji nlezianya anya mgbe niile ka njedebe ndị dị elu nwere njedebe kachasị elu. Na nke a, onye nrụpụta echekwala ụgwọ iji plastik na azụ na iko n'ihu, ọ bụ ezie na aka ọ na-esiri ike ịghọta.
Ọbụna okpokolo agba nke ahụ gị, nke odi ka aluminom wuuru ya, ha na-eji polycarbonate eme ihe n'ezie. Na nke a, ekwesiri ịsị na onye nrụpụta Asia arụgoro ọrụ ya.
Aka ahụ zuru oke, ọnụ ya dị mma na aka ya akụkụ 139.6 x 69 x 7.7 mm yana 130 gram ibu ibu mee ka Honor 6 bụrụ ezigbo njikwa
Sọpụrụ 6, ama dị ike nke na-erughị euro 350
Omume nke Honor 6, na-enweghị ịbụ otu n'ime ndị kacha mma na ahịa, na-emema na-agụnye ndị kasị adịchaghị nso na mpaghara Ekele ya na ihuenyo 5-inch na incell technology nke ruru mkpebi HD zuru ezu.
Agba ndị ahụ na-ele anya ma dị nkọ, na mgbakwunye na inwe echiche karịrị nke ziri ezi. N'akụkụ a enweghị ihe ịjụ, enwere obere ekele maka nnukwu yapixel njupụta, 445pp.
Ọzọkwa na Ntọala ihuenyo, anyị nwere nhọrọ gbanwee agba agba ka oyi ma ọ bụ ụda ọkụ, ihe m masịrị ọtụtụ ebe ọ bụ na enwere ike ịmegharị ya na onye ọrụ ọ bụla.
N'ihe banyere Honor 6 anyị na-ahụ ihe nhazi Kirin 920 octa-isi 1.7 GHz na, yana ya 3 GB nke Ram na 16 GB nke esịtidem nchekwa na ike-gbasaa site ya Micro SD kaadị oghere.
Igwefoto, otu n'ime ike nke Honor 6
Sony bụ eze nke ihe mmetụta, na Huawei nnukwu onye ahịa. Ma na Honor 6 na-etinye oghere Sony EXMOR RS IMX214 13 megapixel na nnukwu mkpebi ọkụ ọkụ na-ese foto karịa oke.
Anyị enweela ike ịnwale n'ime ihe ngosi ahụ na, na-echeba ọkụ ọkụ na-eguzo na nkwụnye nke ndị Asia, eziokwu bụ na lnwude iya dụ mma. Gosiputa ngwa ngwa, ọ bụ ezie na mgbe ị na-ewere macrophotograph ọ na-efu obere ihe iji bido, ọ bụ ezie na ọ naghị ewe iwe.
Banyere igwefoto dị n'ihu, anyị na-ahụ a Anya 5 megapixel nke ahụ na-enye karịa arụmọrụ zuru oke iji were onwe gị ma ọ bụ kpọọ oku vidiyo. Ọ dịghị ihe na-ajụ na nke a
Huawei ekwenyeworị na nsopụrụ Honor ya ga-ada ngwa ngwa n'ahịa Europe. Ma ọ bụrụ na ịchọọ ntakịrị ntanetị ị ga-ahụ na e nweela ụlọ ahịa na-enye Honor 6 ezigbo ọnụahịa mara mma: 299 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Honor 6, mmetụta mbụ nke Huawei smartphone dị ike
dị mma, nsọpụrụ 6 ruo 199 ?? You nwere ike ịgwa ebe ị hụrụ ya? Daalụ
Njehie na nkọwa m, ọ na-efu € 299.
Mark Rivero dijo
eziokwu bụ na ọ naghị adị njọ, ọ bụ ezie na maka uto m ọ ka nọ n'azụ Xiaomi
Zaghachi Marcos Riveiro
MWC 2015: OS anyị na-egosi LG Spirit na vidiyo
[Video] Telefónica na-enye MWC15 Filip, Smartwatch maka ụmụaka ka ha wee nọrọ mgbe niile